Kenya oo lala wadaagay digniino ku aaddan weerarkii hotel Dusit ee Nairobi - Halbeeg News
Muuqaal ay kaamirada qarsoon duubeen soo bandhigay laba qof oo looga shakisan yahay in ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaada Hotel Dusit ee Nairobi
NAIROBI (HALBEEG)- Saraakiisha eer Galbeedka ah ayaa aad uga xumaaday in ay Kenya ka soo jawaabi weysay digniino la xiriiro weerarkii Nairobi ee lagu dilay 14 qof.
Nabad sugidda Kenya waxaa loo jeediyay digniino la xiriira in ururka Al-shabaab ay qorsheynayaan weerarro heer sare ah oo ay la maagan yihiin wadamada Geeska Afrina horaanta sanadkan cusub iyo intii lagu guda jiray ciidda Kirishtanka.
Saraakiil reer Galbeed ah iyo ilo wareedyo kale ayaa jariiradda The Guardian u sheegay in dhowr digniin loo diray ciidamada ammaanka Kenya bilihii la soo dhaafay waxa ayna saraakiisha sheegeen in ay aad uga walwalsanaayeen in dowladda Kenya aanay jawaabo la taaban karo la sameynin arrinkan.
Sarkaal ka tirsan nabad sugidda Kenya ayaa sheegay digniinta lala soo wadaagay ee ku aaddan weerarka aysan dhameystirneen laakin dalka uu ku jiray feejinaan sarreyso tan iyo bishii Nofeembar sanadkii tagay.
Ciidamada ammaanka ayaa ka nadiifiyay hotelka Dusit ee degmada Westland oo ay afar nin oo hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab maalin ka hor soo weerareen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in 14 qof lagu dilay weerarkaas.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkii lagu qaaday Hotelka Dusit iyagoo sidoo kale weerarro kale ka fuliyay meelo kala duwan oo ka tirsan Kenya.
2013-kii ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday moolka West gate waxa ayna halkaasi ku dileen 67 qof.
Soomaaliya iyo Turkiga oo ka iska kaashanaya dhinaca ammaanka